विश्वका यी १५ देश जहाँ महिलाले ब’क्षस्थ’ल देखाए दिइन्छ यस्तो कठोर स’जाय ! हे’र्नुहोस् ती कुन कुन देश हुन्…. – SUDUR MEDIA
विश्वका यी १५ देश जहा महिलाले स्त.न देखाए दिइन्छ यस्तो कठोर सजाय ! यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो महिलाका स्त.नहरुले पुरुषहरुलाई आकर्षित गर्छन् । बच्चाका लागि स्त.नपान गराउनु एउटा काम हो भने से.क्सका लागि पनि स्त.नको प्रयोगलाई अति नै महत्वका साथ लिने गरिन्छ ।समाजमा बिना कपडा हिन्न पाउने मागका साथ विभिन्न राष्ट्रहरुमा महिलाकर्मीहरुले क्याम्पिन नै चलाउने गर्छन् ।
दुनिया विचित्रको छ ! सरकारले दिएको मुआब्जा चित्त नबुझेपछि हाइवेको बीचमा रह्यो घर…..चिनको जीयान प्रोभिन्स विनलिङमा एउटा यस्तो घर छ त्यहाँ पुग्ने जो कोहि अचम्ममा पर्दछन । ६ लेनको हाइवेको बीच भागमा एउटा चार तले घर छ । जुन घर एक जोडीले बैंकको लोन लिएर बनाएका हुन् । जब रोडको योजना आयो उनीहरुलाई सरकारले दिएको मुआब्जा चित्त बुझ्दो भएन । र उनीहरुले त्यो घर नछोड्ने निर्णय गरे । उनीहरुको ढिपी देखेर सरकारले भत्काउदै गरेको उक्त घर त्यत्तिकै छोड्यो । अहिले सवारी साधन उक्त घरको दाया बाया भएर गुड्छन । ति दम्पति आधा भत्किएको उक्त घरमा बस्दै आएका छन ।
नेपाल मै भेटियो एक किलोको ३० लाख पर्ने काठ, काठको जंगलमै पुग्दा जे देखियो : यसरी गर्नुहोस यसको खेति (पुरा भिडियो) कुनै रुखको काठको मूल्य लाखौमा हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । अझ पुरै रुखको हैन एक किलोग्राम कै ३५ लाख रुपैया सम्म पर्छ भन्दा जो कसैले पनि जिब्रो निकाल्छन । तर यहि हो वास्तविकता ।
पुर्वसेना धन बहादुर पुनले गुल्मीमा रहेको आफ्नै बारीमा रोपेका छन् त्यो रुख । जुन रुखको नाम हो अगरुठ । जुन रुखको मूल्य कम्तिमा एक लाख रुपैया किलो र बढीमा ३५ लाख रुपैया सम्म पर्दछ । उनै धन बहादुर पुनसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :